Zuru okè data agaghị ekwe omume | Martech Zone
Marketingzụ ahịa n'oge a bụ ihe na-atọ ọchị; ebe mgbasa ozi ahịa weebụ dị mfe karịa karịa mkpọsa ọdịnala, enwere ọtụtụ ozi dịnụ na ndị mmadụ nwere ike kpọnwụọ na ọchịchọ maka ịmatakwu data na 100% ozi ziri ezi. Maka ụfọdụ, oge echekwara site n'inwe ike ịchọpụta ọnụọgụ ndị mmadụ hụrụ mgbasa ozi ha n'ịntanetị n'oge ọnwa enyereghị aka site na oge ha na-anwa ịhụ ihe kpatara ọnụọgụ okporo ụzọ ha anaghị agbakwunye.
E wezụga enweghị ike maka data zuru oke, enwerekwa data data na-enye nsogbu. N'ezie, enwere ọtụtụ ihe na ọ nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ ịhụ oke ọhịa maka osisi. Ọ kwesịrị na m kwesiri ile anya ọnụego bounce ma ọ bụ ọnụego ọpụpụ? O doro anya, ọnụahịa peeji bụ ihe data bara uru, mana enwere mgbanwe dị mma nke nwere ike ịlele ole peeji ọdịnaya enyere iji mezuo ebumnuche n'ịntanetị? Ajuju enweghi ngwucha ma azịza ha dịkwa. Onye ọkachamara nwere ike ịgwa gị, "ọ dabere na ya", mana onye nwere isi ya na igwe ojii nke dijitalụ nchịkọta nwere ike iche na ọnụọgụ ọnụọgụ zuru oke ma ọ bụrụ na ha elelee ya niile.
Na mpaghara abụọ a, azịza ya dị mfe - mee ya na ezughị okè n'ihi na data zuru oke na / ma ọ bụ data zuru oke agaghị ekwe omume. Otu n'ime ụmụ okorobịa ndị na-ekwu okwu banyere nke a bụ Avinash Kaushik. ma ọ bụrụ na ị maghị aha, ọ bụ New York Times onye na-ere ahịa kachasị mma, otu n'ime ndị isi Google ma nọrọ na bọọdụ nke ọtụtụ Mahadum. Blog ya, Occam's Razor, bụ ọla edo dị ọcha maka onye nyocha data nke oge a na nso nso a ka m banyere n'otu n'ime akwụkwọ ndị okenye ya aha ya, Usoro 6 iji mepụta ụdị echiche gị. N'ime ya, ọ na-akọwa echiche na enweghị usoro data zuru oke na ndị mmadụ kwesịrị ịgbaso ụzọ dị mfe karị na "Virtuous Data".
N'ime nnukwu ihe niile ọ na - ekwu, nke kachasị pụta bụ:
… Ọrụ gị anaghị adabere na data na 100% iguzosi ike n'ezi na weebụ. Ọrụ gị dabere n’inyere ụlọ ọrụ gị aka Bugharịa Ọsọ ma Chee Smart.
Oge ọzọ iburu nchịkọta, cheta na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma data ma soro usoro kachasị mma, ịkwesịrị ịdị njikere ịme mkpebi na otu ị ga-esi na-aga n'ihu. Maka na agbanyeghị mbọ ị na - agba iji gbaa mbọ nweta data zuru oke, oge ị ga - eme ya nwere ike ịbụ na ị na-arụ ọrụ na ọnụego ntụgharị, na-eke ule ọhụụ ọhụrụ, wdg. Know mara, ihe ndị ga - enyere ụlọ ọrụ gị too ma debe oru gi.
Want chọrọ ịmalite mkparịta ụka? Gakwuru m na Twitter @Igihe.
Tags: Analyticsmgbanwedataemail Marketingikwesị ntụkwasị obioge